Tattoo shark Maori, muxuu macnaheedu yahay gabalkan awoodda badan? | Tattoo
Tattoo shark Maori, muxuu macnaheedu yahay gabalkan awoodda badan?
Ma aha Cherry | | Qabiil
Tattoo ah sharku Maori waa mid ka mid ah nashqadaha soo jireenka ah ee noocan ah qabyaaladda, Naqshad awood badan oo layaab leh oo uu waxyooday mid ka mid ah boqorrada badda.
Ma rabtaa inaad ogaato waxa loo yaqaan 'Tattoo' iyo macnaha qotada dheer ee maori xayawaankan? Akhriso si aad u ogaato!
1 Maori iyo libaax badeed, xiriir qadiim ah
2 Sidee looga faa'iideysan karaa tattoo-kan?
Maori iyo libaax badeed, xiriir qadiim ah
Maori kuma koobnayn ugaarsiga iyo cunista kalluumeysatada, laakiin waxay lahaayeen xiriir aad u gaar ah iyaga, maxaa yeelay waxay u haysteen inay yihiin ruux ilaaliya. Qoys walba, xaqiiqdii, waxay tixgeliyeen inay leeyihiin ruux shark ah oo ilaaliya. Waxay sidoo kale aad u ixtiraamayeen iyaga oo dagaalyahannadu ay doonayeen inay iyaga la mid noqdaan oo ay u dhintaan "sida sharkooyinka cadcad" intii lagu jiray dagaalladii.
Sidoo kale, waxay lahaayeen halyeeyo badan oo laxiriira libaax badeedka. Tusaale ahaan, waxay rumeysnaayeen in Jidka Caano-faneedka uu ahaa shimbir shar ah oo miisaska Maui uu cirka dhigay Ama, hadday doonnidooda ku qalibmaan badda, waxay u yeeri lahaayeen shark si ay si ammaan ah ugu qaadaan xeebta.
Sidee looga faa'iideysan karaa tattoo-kan?
Tattoo shark Maori shark ah, xiriirkiisa qoto dheer ee uu la leeyahay dadkiisa, waa xulasho wanaagsan oo loogu talagalay naqshad cusub. Marka lagu daro muujinta bahalnimada xayawaanadan, waxaad leedahay noocyo badan oo aad kala dooran karto: mako, hammerhead, white ...
Maaddaama ay tahay qaab qabiileed, naqshad xayawaankani waxay si gaar ah ugu eegi doontaa madow iyo caddaan iyo khadad qaro weyn. Sidoo kale waa wax xiiso leh in la isticmaalo qaababka isku dhafan ee Maori-ka oo looga faa'iideysto meesha jidhka lagu dhejin doono si naqshaddu u "qulquleyso" una soo noolaato. Ugu dambeyntiina, waxaa lagugula talinayaa inaad doorato naqshad cabirkeedu sarreeyo, si khadadku aysan isugu milmin midba midka kale muddo ka dib ayna u sii wadaan ku raaxeysiga naqshadda si faahfaahsan.
Noo sheeg, ma haysaa wax naqshado tattoo ah Maori shark ah? Ma garanaysay macnaheeda? Xusuusnow inaad noo sheegto wax kasta oo aad rabto faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Qabiil » Tattoo shark Maori, muxuu macnaheedu yahay gabalkan awoodda badan?
Tattoo shimbir, shimbir aad u taxaddar badan